Askar American Ah Oo Lagu Dilay Bariga Dalka Afghanistan. – Bogga Calamada.com
Askar American Ah Oo Lagu Dilay Bariga Dalka Afghanistan.
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in dagaallo culus oo socday muddo Saddex maalmood oo xiriir ah ay ka dhaceen deegaan ka tirsan gobalka Kabisa ee Bariga dalkaasi.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa Ashahaado la dirirka maamulka daba dhilifka Kaabul ay weerar kusoo qaadeen Xarumo ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay ku leeyihiin duleedka degmada Tajab ee gobalkaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa dagaal culus oo Maalmo socday kala hortagay kolanyada Americanka horkacayo ee duulaanka kusoo qaaday degmadaasi,iyadoo ugu dambeyntii la jabiyay ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaatkii la socday.
War rasmi oo uu soo saaray Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid Afhayeenka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayuu ku xaqiijiyay in dagaalkaasi lagu dilay Lix askari oo American ah laguna dhaawacay Sideed kale oo isla ciidamada Mareykanka ah.
Sidoo kale dhanka maleeshiyaatka maamulka Ridada Kaabul waxaa dagaalkaasi looga dilay Todaba askari Sagaal kalane waa laga dhaawacay,waxaa deegaankii lagu dagaalamay imika ku sugan ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Qoraalka Sheekh Dabiixullaahi Mujaahidiin ayaa lagu xusay in dagaaladaasi dhanka Mujaahidiinta ayay kaga shihiideen Labo Mujaahid tiro kalane ay kaga dhaawacmeen.